Iidolophu zamandulo zaseSpain: Ukusuka eSantillana del Mar ukuya eMontefrío | Uhambo lweNdaba
ULuis Martinez | 30/04/2022 19:15 | España, Izikhokelo
Kukho amakhulu iidolophu zamaxesha aphakathi eSpain. Ziidolophu ekubonakala ngathi ixesha liphelile kwaye, xa sibandwendwela, basithuthe basise kwixesha lazo lamandulo elinobuhandiba okanye lobugorha ababephila kulo. iindawo zokuhlala, imida yemida okanye amaziko amakhulu ezoqoqosho.
Ukuhambahamba kwizitrato zayo ezimxinwa, ukubona amakhaya ookhokho bayo nokutyelela amatye ayo ezikhumbuzo amahle kusenza sizive njengabalinganiswa bamaXesha Aphakathi. Kwaye eyona nto ingcono kukuba ungazifumana onke amaphondo eSpainukusuka Barcelona phezulu Cáceres kwaye isuka Cantabria phezulu Málaga. Kuyo yonke le nto, sicebisa ukhenketho kwezona dolophu zintle zaphakathi eSpain.
1 ISantillana del Mar, iklasikhi phakathi kweedolophu zamandulo zaseSpain
2 IBesalú, ilifa elinomtsalane lamaRomany
3 I-Aínsa, kwi-Huesca Pyrenees
4 Frías, isixeko samaxesha aphakathi eBurgos
5 IAlbarracín, enye yezona dolophu zintle zamaxesha aphakathi eSpeyin
6 Montefrío, iAndalusian yamandulo
ISantillana del Mar, iklasikhi phakathi kweedolophu zamandulo zaseSpain
ISantillana del Mar, mhlawumbi eyona dolophu iqhelekileyo yaseSpain
Siqala uhambo lwethu kwindawo mhlawumbi eyaziwa kakhulu kwidolophu yaphakathi kwilizwe lethu. Ukuba nabani na kuthi ubuzwe malunga nedolophu ephakathi eSpain, uninzi lwethu luya kuphendula iSantillana del Mar.
Ngenxa yokuba, ukongeza, yi-villa entle entliziyweni ye Cantabria. Hayi ilize, ibambe udidi lwe indibano yembali yobugcisa kwaye yinxalenye yenethiwekhi ye Ezona Lali Zintle eSpain. Enyanisweni, besinokukuxelela ukuba le dolophu ayichithwanga. Phantse zonke izakhiwo zayo zinento enomdla.
Kodwa kukho ezininzi ekufuneka uzibone. Yimeko ekhangayo Icawa yaseSanta Juliana, eyakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX ngokulandela imigaqo yeRomanesque, nangona yaphinda yakhiwa nge-XNUMX. Qiniseka ukuba undwendwela i-cloister yayo, kunye neentloko zayo ezingamashumi amane anesibini. Kukwabalulekile ukuba ubone okubalulekileyo ibhotwe lentlabathi, ilitye elinqabileyo le-Renaissance yokuqala kunye ne-platelesque motifs.
Ayiyiyo yodwa indlu yesintu onokuthi uyibone eSantillana. Sikwacebisa ukuba u tyelele iibhotwe zaseViveda, eMijares okanye eValdivieso, kunye nokwakhiwa IHolo yaseKapa, isimbo seBaroque. Ngokufutshane, njengoko besisithi, zonke izakhiwo zale dolophu yaseCantabrian zibangel’ umdla. Ngenxa yokungakwazi ukukuxelela malunga ngamnye wabo, siya kukucebisa ukuba ubone nezindlu zeQuevedo kunye neCossío, i-Villa, i-Archduchess okanye iinqaba ze-don Beltrán de la Cueva, i-del Merino kunye ne-don Borja. Konke oku ngaphandle kokulibala Imyuziyam yaseAltamira, kunye nomfanekiso wemiqolomba yayo edumileyo.
IBesalú, ilifa elinomtsalane lamaRomany
Ngoku sihamba sisiya kummandla waseLa Garrocha, kwiphondo lase IGerona, ukukuxelela ngeBesalú, enye idolophu enomtsalane yamaxesha aphakathi eSpeyin. Sele ukufikelela efanayo kwi villa, kunye yayo puente ukususela kwinkulungwane ye-XNUMX, iyamangalisa. Ilinganisa ikhulu elinesihlanu leemitha ubude kwaye, nangona kunjalo, iye yabuyiselwa ngamaxesha amaninzi. Iinqaba zayo ezintathu zivelele. Emibini isecaleni kodonga kunye neyesithathu, i-hexagonal kunye namashumi amathathu eemitha ukuphakama, embindini.
UBesalu naye indibano yembali yobugcisa. Kwaye inomdla Ikota yamaJuda izitrato ezimxinwa apho usenokubona iintsalela zendlu yesikhungu endala kunye ne miqveh, indawo ekwakuhlanjwa kuyo ngokwesithethe. Kwelakhe icala, i indlu yeemonki yaseSant Pere Yakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX, nangona namhlanje yitempile kuphela eseleyo. Kwaye, kwisikwere esinye, unendlu yaseCornellà kunye nendala Isibhedlele saseSant Julia, kunye ne-façade evela kwi-XII.
La Icawa yaseSan Vicente Yintsimbi ye-Romanesque ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX kwaye, ngaphandle kweendonga, unokubona iintsalela zenqaba kunye necawa yaseSan Martín. Kodwa sikwafuna ukukucebisa ngento ekusenokwenzeka ukuba ayizukuvela kubakhenkethi abaninzi abaqhelekileyo. Kuba useBesalú, yiza Castellfullit de la Roca, idolophu entle yamaxesha aphakathi nokuba incinci kwaye ibonakala ngathi ijinga kwingxondorha.
I-Aínsa, kwi-Huesca Pyrenees
Usodolophu wePlaza waseAinsa
Enye yezona dolophu zintle zamaxesha aphakathi eSpain yiAínsa, ekwingingqi yeSobrarbe kwiphondo laseAínsa. Huesca. Kumtsalane wayo wembali yongeza indalo enelungelo, kuba inxalenye yommandla kamasipala wayo ibandakanyiwe kwindawo entle Ipaki yeNdalo yaseSierra kunye neGuara Canyons.
Ngoko ke ixesha eliphakathi sinokuyiqwalasela i-Aínsa ukuba ilivo ibeka isiseko sayo ngonyaka wama-724 ngenxa yommangaliso womnqamlezo womlilo. Ngokutsho kwakhe, ngenxa yenkangeleko yale nto inamandla angaphezu kwawemvelo, imikhosi yamaKristu yaseGarci Ximénez yakwazi ukoyisa amaSilamsi. Sele kwakhiwa ngenkulungwane yeshumi elinesixhenxe itempile enomnqamlezo ngaphakathi ukukhumbula eli bali usenalo nanamhlanje.
Kodwa uphawu olukhulu lwe-Aínsa lulo nqwelweni, eyakhiwa malunga nenkulungwane ye-1931. Yayiyimvelaphi yokwenene yaloo dolophu, ekubeni ukusuka kuyo iindonga zazandisiwe ukuze zikhusele abo bahlala kwindawo eyingqongileyo. Ukusukela ngo-XNUMX siSikhumbuzo seMbali yoBugcisa.
Sikwacebisa ukuba ubone kwidolophu yaseHuesca Icawa yaseSanta Maria, eyakhiwa phakathi kwenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX ngokulandela iicanon zamaRoma. I-portal ene-archivolts ezine kunye ne-nave enye egqunywe nge-half-barrel vault ivelele ngokulula kwayo, kodwa, ngaphezu kwayo yonke, inqaba, yemilinganiselo ekhethekileyo kwi-Aragonese Romanesque.
Ungalibali ukudlula, kwakhona, ngobuhle bayo Isikwere esikhulu, evulekileyo kunye neendawo zayo zokuhlala, okanye ukubona izindlu zeArnal kunye neBielsa, zombini ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX. Kodwa, ngaphezu kwako konke, hamba kwizitrato zayo ezimxinwa ezinamatye ngokungathi ubukwiXesha Eliphakathi.
Frías, isixeko samaxesha aphakathi eBurgos
Umbono weFrías, ilitye elinqabileyo eliphakathi kwiphondo laseBurgos
Ngabemi abangaphantsi kwamakhulu amathathu, uya kumangaliswa ukwazi ukuba le dolophu kwiphondo Burgos uphethe isihloko se sixeko enikwe ngukumkani UJohn II waseCastile ngo-1435. Oku kuya kukunika ingcamango yokubaluleka kwayo kumaXesha Aphakathi.
Enye yeempawu zayo ezinkulu yinto emangalisayo ibhulorho yaseRoma ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX, malunga neemitha ezimalunga nekhulu elinamashumi amahlanu ubude, phakathi kwezona zinde eSpain. Uhlaziyo lwakamva longeza izinto zeGothic ezinjengezinye iiarches zayo, ezikhonjiweyo. Kwakhona kamva yinqaba esembindini eyihombisa.
Kodwa, mhlawumbi, eyona nto inomtsalane kaFrías yiyo izindlu zamaxesha aphakathi. Abanye babo, njengabo baseCuenca, babonakala bejinga endulini kwindlela edibana nayo Icawa yaseSan Vicente kunye inqaba yaseVelasco. Izithsaba zokugqibela, ngokuchanekileyo, induli yaseLa Muela kwaye sele ibhalisiwe ngekhulu le-XNUMX, nangona i-bill yayo yangoku ivela kwi-XNUMX. Indawo yayo kunye nobukhulu bayo bunike umlinganiswa wokuzikhusela ongathandabuzekiyo wendawo.
Ngokubhekiselele kwicawe ekhankanywe ngasentla yaseSan Vicente Mártir kunye neSan Sebastián, igcina kuphela ezinye izinto zendlela yayo yamandulo yeRomanesque. Yafumana iintlekele ezahlukahlukeneyo ezanyanzela ukuba iindawo zayo ezininzi zakhiwe ngokutsha. Ngokunjalo, ikhava yayo endala yasiwa kwiMyuziyam yaseCloisters eNew York.
Kuya kufuneka ubone ezinye izikhumbuzo zenkolo eFrías njengee-convents zaseSan Francisco naseSanta María de Vadillo, kunye Icawa yeGothic yaseSan Vítores. Kwaye, malunga nabemi, sicebisa ukuba undwendwele indlu yamajoni kunye nebhotwe laseSalazar. Konke oku ngaphandle kokulibala ikota yamaYuda, eyayizitrato zangoku zeConvención kunye neVirgen de la Candonga.
IAlbarracín, enye yezona dolophu zintle zamaxesha aphakathi eSpeyin
Sibuyela kuluntu oluzimeleyo lwe IAragón, ngokukodwa kwiphondo le Teruel, ukuze ndikuxelele ngeAlbarracín, ekuqikelelwa ukuba isiseko sayo kuqikelelwa malunga nenkulungwane ye-XNUMX, xa iqela lamaSilamsi lahlala apho. Ngenxa yoko, wakha umfanekiso oqaqambileyo alcazar ngoku eliSikhumbuzo seMbali yezoBugcisa.
Nangona kunjalo, idolophu yonke iphethe isihloko se imonumental complex. Kwixesha lamaSilamsi ikwangowe inqaba yokuhamba, eyayiyinxalenye yeendonga ezikhuselayo zedolophu. Le yinqaba yeDoña Blanca, ebekwe kwelinye icala lale paki.
Kwaye, ecaleni kwenqaba, unayo umsindisi cathedral, eyakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX kumabhodlo etempile yakudala yamaRomanesque ngenkulungwane ye-XNUMX. Idibanisa iGothic, i-Renaissance kunye neendlela zeBaroque. Kwakhona, ngaphakathi, unokubona ingqokelela enomdla yee-tapestries zeFlemish.
Ecaleni kwecathedral yi Ibhotwe le-Episcopal, kunye ne-façade ye-baroque enomdla, kwaye, kwindawo ebizwa ngokuba yiPortal de Molina, indlu yaseJulianeta, isakhiwo esiqhelekileyo esithandwayo. Ekugqibeleni, i IHolo yaseKapa Isusela kwinkulungwane ye-XNUMX.
Montefrío, iAndalusian yamandulo
IMontefrío, enye yezona dolophu zintle zaseSpain
Ifumaneka kwiphondo le Granada, iMontefrío yayibaluleke kakhulu kumaXesha Aphakathi UAl Andalus. Inqaba yalo yayinentendelezo yetempile Nasrid ukumkani Ismail III. Le nqaba ibekwe kwinduli enomtsalane apho kukwakhona icawa yelali, eyakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX ngu UDiego waseSilowam.
Kodwa asikuphela kwento oyibonayo eMontefrío. Ukongeza kokuhambahamba ezitalatweni zayo kwaye ubone izindlu zayo ezimhlophe, kuya kufuneka undwendwele indawo enomtsalane yeCerro de los Gitanos, apho kukho iindawo ezininzi zezinto zakudala kunye nedolophu yaseRoma kunye nebhulorho. Kwaye kwiBarranco de los Molinos uya kubona iingxangxasi kwaye, ngokuchanekileyo, iimill ukusuka kwixesha lesiLatini.
Ngokufanayo, kufuneka undwendwele iMontefrío, ekwabhengezwa nayo indibano yembali yobugcisa, iicawa zaseSan Sebastián naseSan Antonio, iRenaissance yokuqala kunye neyesibini iBaroque. Kwelinye icala, le yoMzaliso yi-neoclassical. Ngokwenxalenye yayo, i Indlu yoRhwebo kunye Isibhedlele saseSan Juan de Dios basuka kwinkulungwane ye-XNUMX kwaye iHolo yeDolophu yindlu ye-manor ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX.
Ukuqukumbela, sikubonise ezona zinomtsalane Iidolophu zamandulo zaseSpain. Nangona kunjalo, ngokungenakuphepheka, siye sashiya abaninzi kwimibhobho. Ukukhankanya nje ezimbalwa, siya kukucaphula UAlquézar kwi Huesca, I-Peratallada eGirona, Ronda eMalaga okanye I-Olite eNavarre. Hamba uye kubandwendwela, awuyi kuzisola.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo ezibalekayo eYurophu » España » Iidolophu zamaxesha aphakathi eSpain
eyona yacht inkulu ehlabathini